အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်သည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Jan Hornik ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်သည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အထက်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Jan Hornik ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား (၁၀.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့ ၁၅၀၀ နာရီအချိန်တွင်
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H. E. Mr. Jan Hornik ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H. E. Mr. Jan Hornik ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား (၁၀.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ
02/10/2020 - 15:47
Westminster Foundation for Democracy (WFD) ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအရ ကော်မတီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း Mr. Alvin Lie က ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆိုင်ရာနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာများအထောက်အကူပြုရန်အတွက် လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
WFD ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အရ ကော်မတီအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Mr. Alvin Lie နှင့်အဖွဲ့သည် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ သယံဇာတ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Francois Lafreniere အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Francois Lafreniere အား (၇.၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဥက္ကာမင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ကနေဒါနိုင်ငံ Ontario ပြည်နယ် အမတ်ဟောင်း Ms. Monique Marthe Smith ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဥက္ကာမင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ကနေဒါနိုင်ငံ Ontario ပြည်နယ်အမတ်ဟောင်း Ms. Monique Marthe Smith
02/05/2020 - 15:55
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီနှင့် Westminster Foundation for Democracy (WFD)၏ အစီအစဉ်ဖြင့် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် Mr.Stephen Twigg တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီနှင့် Westminster Foundation for Democracy (WFD)၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် Mr.Stephen Twigg တို့သည်
02/05/2020 - 15:49
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ လူဝင်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ထွေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များက လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ထွေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ
02/05/2020 - 12:18
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၅.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၁:၃၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-18) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။